• Page 261 of 265 • NEWS & ENTERTAINMENT
ဂျပန်မှာ အရမ်းနာမည်ကြီးနေတဲ့ ခါးသွယ်ပြီး လှပစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်း
06/11/2018 Yan Naing 0
ဂျပန်မှာ အရမ်းနာမည်ကြီးနေတဲ့ ခါးသွယ်ပြီး လှပစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်း ခါးသွယ်သွယ်လေးနဲ့ လှရုံတင်မဟုတ်ဘဲ လူရဲ့ကိုယ်နေဟန်ထားကိုပါ မတ်မတ်ကလေးနဲ့ စမတ်ကျလှပစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်းဆို ပျိုမေတို့ စိတ်ဝင်စားကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းလေးက ခက်ခက်ခဲခဲလည်း မဟုတ်ဘဲ အချိန်အနည်းငယ်ပေးရုံနဲ့ ထူးခြားတဲ့ ရလဒ်ကို ရရှိစေမယ့် နည်းလမ်းလေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းလေးကို ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ Continuous reading
06/11/2018 L H 0
“ချမ်းသာဖို့အတွက် ပိုက်ဆံသုံး ပါ” နည်းနည်းထူးဆန်းသွားလား..? သူငယ်ချင်း… ငါတို့က ချမ်းသာဖို့ ပိုက်ဆံစု ပါပဲ သိခဲ့တာလေ…… သူဌေးဆိုတဲ့ လူတန်းစားတွေကို ကြည့်လိုက်စမ်းပါ သူငယ်ချင်း…… သူတို့ဘဝတွေဟာ ချမ်းသာပြီးရင်းချမ်းသာနေကြတယ်…… ငါတို့ သာမာန်အလုပ်သမားဘဝတွေကို ကြည့်လိုက်စမ်းပါသူငယ်ချင်း…. ငါတို့တွေဟာ ဆင်းရဲပြီးရင်းဆင်းရဲနေကြတယ်….. ဘာဖြစ်လို့လဲ……. ငါတို့လို သာမာန်အလုပ်သမားတွေရဲ့ ဝင်ငွေဟာ Continuous reading
ရန်ကုန်မြို့  မြေအောက်မှ မဟာလျှို့ ဝှက်ချက်များ အင်္ဂလိပ်တွေဟာ မြန်မာနိူင်ငံကို သိမ်းပိုက်ပြီး ရန်ကုန်မြို့ ကို အစိုးရ ရုံးစိုက်ရာ မြို့ အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြတယ်။ မြို့ တော် ကို စနစ်တစ်ကျ မြို့ပြအင်္ဂါရပ်တွေနဲ့ အညီ တည်ဆောက်ခဲ့ကြ တယ်။ ပြင်သစ် ကုမ္ပဏီ Continuous reading
စစ်မှန်တဲ့ လက်တွဲဖော် တွေ့ပြီလား (၁)
05/11/2018 L H 0
စစ်မှန်တဲ့ လက်တွဲဖော် တွေ့ပြီလား (၁) သူ့ကိုတွေ့ရရုံနဲ့၊ သူရှိနေရုံနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အဆင်မပြေမှုတွေ အားလုံးပျောက်ကွယ်သွားတယ် ဆိုရင် သူဟာကိုယ့်အတွက် မလွှတ်တမ်း ဆုပ်ကိုင်ထားရမယ့် လက်တစ်ဖက် ပိုင်ရှင်ပါ။ လေပြင်းမုန်တိုင်းတွေတိုင်း အချစ်ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ တန်ခိုးတွေကြောင့် လေညင်းလေးတွေအဖြစ် ပြောင်းသွားမှာ ရှည်လျားလွန်းတဲ့ ဘဝခရီးလမ်းမှာ လောကဓံ အကောင်းအဆိုးကို Continuous reading
သူငယ်ချင်းဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ် တကယ်တော့ သူငယ်ချင်းဆိုတာ သွေးသား မတော်စပ်သူတွေ ဖြစ်ပေမယ့် သွေးရင်းတွေထက် ပိုရင်းနှီး ချစ်ခင်နိုင်ကြသူတွေ ဖြစ်တယ်။ ချစ်သူတွေ မဟုတ်ပေမယ့် ချစ်သူတွေထက် ပိုနားလည်နိုင်ကြသူတွေ ဖြစ်တယ်။ အကြံပေး အရာရှိတွေ မဟုတ်ကြပေမယ့် လိုအပ်လာတဲ့ အချိန်မှာ တိုင်ပင်ဖော် တိုင်ပင်ဖက်တွေလည်းဖြစ်ကြတယ်။ ရင်ဘတ်ချင်း မတူပေမယ့် Continuous reading
နေ့စဉ် ၁၅ မိနစ် မျှလောက်သော အချိန်ပေး၍ သင်၏ ဆိုးနေတဲ့ကံကို ပြုပြင်နည်း
နေ့စဉ် ၁၅ မိနစ် မျှလောက်သော အချိန်ပေး၍ သင်၏ ဆိုးနေတဲ့ကံကို ပြုပြင်နည်း ကံကိုပြန်ကောင်းလာအောင် ပြုပြင်နည်း။ သေချင်လောက်အောင်ထိ ဆိုးနေတဲ့ကံကို ကုသိုလ်၅-မျိုးနဲ့ ပြုပြင် ယူလို့ရပါတယ်။ သေချင်လောက်အောင် ဆိုးနေတဲ့ကံကို ကုသိုလ် ၅မျိုးနဲ့ နေ့စဉ်ပြုပြင် ပစ်လိုက်စမ်းပါ။ ဆိုးနေတဲ့ကံ ” နင်နေ ငါသွား Continuous reading
ရိုး ရာ အ စား အ စာ စား ခြင်း ဖြင့် အ ဝ မ လွ န် အောင် နေ ထိုင် ပါ အာ ရှ တိုက် သား တွေ ရဲ့ အ Continuous reading
သေမည့်နေ့ကိုရွှေ့ပစ်နိုင်သောကုသိုလ်များ မြတ်စွာဘုရား သက်တော်ထင်ရှား ရှိစဉ်က ဗေဒင်ကျွမ်းကျင်သော ပုဏ္ဏားမိသားစုရှိရာတွင် ပုဏ္ဏားကြီးသည် မိမိကိုယ်ကို ဗေဒင်တွက်ကြည့်ရာ … အသက် (၆၀)ပြည့်သည့်နေ့တွင် သေရမည်ကို သိလေ၏။ ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားကို မကိုးကွယ်သော်လည်း သေရမည်ကို ကြောက်လန့်၍ ဘုရားထံ သွားလေ၏။ ဘုရားရှင်ထံရောက်သော် မြတ်စွာဘုရားက ” မှန်၏။ Continuous reading
05/11/2018 Yan Naing 0
နှစ်ပေါင်း ၄၀၀ကျော် သက်တမ်းရှိ ချိန်ကိုက် ပိဋကတ်တိုက် ရေးသားသူ – ပြည်ထူးစံ မြောက်ဦးခေတ်တွင် သာသနာတော်သည် နေရောင် လရောင်ပမာထွန်းကားခဲ့ကြောင်းကို (အုန်းပွင့်ပန်းခိုင် တလှိုင်လှိုင်) မြောက်ဦးမြို့ရှိ ဘုရားပုထိုးစေတီပေါင်း (၁၅၅၂) ဆူ (ဝါဝါဝင်းဝင်း မြစ်ကိုဆင်း) ဟူသော စာချိုးအရ မြောက်ဦးရှိ သံဃာတော်ပေါင်းဟာ (၄၄၄၄) Continuous reading
ဖုန်း နဲ့ ကွန်ပျူတာ တို့ရဲ့ အန္တရာယ်မှ သင့်မျက်လုံးကို ကာကွယ်နိုင်သော လွယ်ကူသည့် နည်း (၁၀) နည်း
ဖုန်း နဲ့ ကွန်ပျူတာ တို့ရဲ့ အန္တရာယ်မှ သင့်မျက်လုံးကို ကာကွယ်နိုင်သော လွယ်ကူသည့် နည်း (၁၀) နည်း လူအများစုသည် မျက်စိကို ကာကွယ်သည့် မျက်မှန်များတပ်ဆင်ခြင်းမရှိဘဲ Laptop, Tablet နှင့် Smart Phone အစရှိသော digital ပစ္စည်းများရှေ့တွင် အချိန်တော်တော်များများ သုံးကြပါသည်။ Continuous reading